» “रंगशाला बन्दै छैन! धुर्मुस सुन्तली चै बनिरहेका छन”!धुर्मुस सुन्तली लाई समाज सेवा के हो भन्ने थाहै छैन ! यस्तो आरोप लागाउने व्यक्ती को हुन ?( भिडियो हेर्नुहोस) “रंगशाला बन्दै छैन! धुर्मुस सुन्तली चै बनिरहेका छन”!धुर्मुस सुन्तली लाई समाज सेवा के हो भन्ने थाहै छैन ! यस्तो आरोप लागाउने व्यक्ती को हुन ?( भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
“रंगशाला बन्दै छैन! धुर्मुस सुन्तली चै बनिरहेका छन”!धुर्मुस सुन्तली लाई समाज सेवा के हो भन्ने थाहै छैन ! यस्तो आरोप लागाउने व्यक्ती को हुन ?( भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ ।ललितपुर । अहिले यो टिकटक, फेस्बुक र युटयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन ।